5 Astaan Oo Muujineysa In Biya Cabkaada Uu Xad Dhaaf Yahay | Xaqiiqonews
5 Astaan Oo Muujineysa In Biya Cabkaada Uu Xad Dhaaf Yahay
Dad Badan ayaa aaminsan in marka ay sii badato biya cabka qofka uu sii siyaado caafimaadka, balse saynisyahanadani waxa ay na leeyihiin biya cabka xad dhaafka waxa uu dhibayaa caafimaadka.
Morgan Sat oo ah qabiir ku takhasusay badqabka iyo caafimaadka waxa uu dadka siinayaa digniin lala yaabo isaga oo leh “Hadii qofka uu cabo wax ka badan 4 koob oo biyo ah saacaddii, waxa ay keeneysaa hoos u dhac ku yimaada Sodium-ka dhiigga”.
Qeybta hoose waxa aan idinku soo gudbineynaa 5 astaan oo muujineysa in aad cabto biya ka badan inta aad u baahantahay.
In aad beegsato dhowr Liitar Oo Biyo ah
Ma ogtahay in cuntada xitaa ay ku jiraan biyo? sidaa darteed uma baahnid in aad naftaada ku qasabto in maalin walbo aad cabto 3 ama 4 litar oo biyo ah.
Sidoo Kale Aqri Halkan Sabab Awgeed Ha Isku Cabin Biyaha Roobka
Sida la wada ogyahay kaadida waxa ay jirka ka saartaa sunta, laakin hadii kaadidaada ay badato waa arin aan wanaagsaneyn,dhaqaatiirtu waxa ay dadka kula taliyaan in qofka uu iska yareeyo biyaha badan hadii todobo mar ka badan uu u baahdo musqusha.
Midabka kaadida caafimaadka qabta waa “Jaalle furan”, kaadida caafimaadka qabta ma ahan nooca qafiifka ah ee ka dhasha biyaha badan ee qofka uu cabo,waxaa kale oo muhiim in la ogaado in midabka kaadida ee ah “jaalle buuxa” iyaduna in ay tahay calaamad muujineysa caafimaad darro.
Marka kiliyaha ay ku mashquulsiyihiin kala saarisata biyaha aad cabtay, taasi waxa ay keeneysaa daal iyo neeftuur badan oo qofka uu dareemo, arinkaasi oo ka dhasha biya badan ee qofka uu cabo.
Faruuryaha oo barara
Biya cabka xad dhaafka ah, waxa uu sababi karaa barar ku yimaado faruuryaha, gacmaha, taasina waxa ay daliil u tahay in kiliyuhu aysan si fiican u shaqeeneynin, si taasi la mid ah biyaha cabka ayaa sabab miisaanka qofka oo bata.